Ny fomba latina fanoratana ny teny Malagasy
117 visiteurs - 250 pages vues
281044 visiteurs - 686323 pages vues
Raha mbola tsy tonga ny vazaha dia tamin’ny litera arabo no nanoratana ny teny Malagasy, amin’ny alalan’ny sorabe. Araka ny fantatra dia ny "Rainay any an-danitra" nataon'i mompera Nacquart ary navoakan'i Flacourt tamin'ny 1657, no sorateny malagasy voalohany natao tamin’ny teny latina. Ireo katesizy amin'ny teny malagasy dia nivoaka ny taona 1785. Raha efa betsaka aza avy eo ny boky sy taratasy nifanerasera, nataon’ny vahiny, efa vita tamin'ny teny malagasy ary nitondra ny tarehintsoratra latina, dia nanapakevitra I Radama I fa io fomba latina io no hanoratana ny teny malagasy satria hitany fa tena tsotra.
Ny Alarobia 23 Martsa 1823 no namoaka ny didy mikasika ny fanoratana ny soratra Malagasy Radama I, izay natao hoe “abidia 1923”. Io abidia voalohany io dia anisan'ny tena tsara satria nampihatra ny fitsipiky ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fonetika (Association Phonétique Internationale (API)). Maro ny miteny fa ny nahatonga an’I Radama I, nifidy an’ny litera latina dia mba tsy hiraikan’ny olo-mahay tamin’ny literatiora arabo ary dia tenim-bazaha no entina fampianarana eto Madagasikara. Nefa teo amin’ny fomba fanoratana dia tsy nifanaraka tamin’ny vahiny izy, ka noraisiny ny litera tsirairay ka nodinihany izay mety tamin’ny teny malagasy. Ny abidia noforonin'i Radama dia manana litera 21 ary tsy mampiasa ny litera c, ny q, ny w ary ny x. Nanapakevitra koa izy mba feo tokana ihany no entin’ny litera iray : ny “a” dia “a” ary ny “i” dia “i”. Ka ny zanatsoratra rehetra (a, e, i, o, u/ou, y) dia vakina amin'ny feo tokana toy ny amin'ny teny frantsay fa tsy maromaro toy ny fomba anglisy.
Fa tamin'ny 1828 anefa dia nisy fihemorana lehibe satria nampiditra fahadisoana tamin'ny fanomezana feo roa samihafa amin'ny litera tokana. Ny litera “o” lasa tononina amin'ny feo “u” indraindray, toy ny amin’ny teny anglisy ary tsindraindray koa tononina amin'ny feo “o” araka ny fanononana azy amin'ny Abidy Ara-drafipeo Iraisam-pirenena.
Ny abidy manaraka dia natao tamin'ny 1962 ary nitazona ny fahadisoana ny litera “o” ary nampiditra koa soratra vaovao hafa “ô” izay vakiana hoe “o” araka ny mahazatra eran-tany. Izany anefa dia tsy manaraka ny fitsipikin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fonetika. Ity abidy 1962 ity dia natao koa mba hahafahana manonona ny voanteny amin'ny fiteny maro avy any anindrana ahenoana ilay feo antsoina hoe “n” an-danilany dia nampiasa ny kamban-tsoratra “gn” ohatra : Tolagnaro. Ny fomba mahazatra dia ny fomba fanoratry ry zareo española, mampiasa ny litera “ñ”antsoina hoe : n tilda.
Ny olana tamin'ny Abidy 1962 dia izy tsy afaka manoratra ny teny nindramina avy any amin'ny teny vahiny toy ny watt, bungalow, fax, taxi, cobalt, quartz, noho ny tsy fisian’ny litera c, q, u, w ary x.
Ka mba hafahana manoratra ireo teny vahiny indrindra ny teny siantifika sy teknika dia novaina ilay abidia tamin’ny 2001, izay atao hoe “abidia vaovao 2001” izay misy litera 26 : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
Nalaina araka ny Famelabelarana nataon'Atoa Andriamihaja Solonavalona tao amin'ny Akademiam-Pirenena Malagasy (22 May 2003) ary koa tao amin’ny sehatra Ny Haisoratra Malagasy sy ny Wikipedia.